Daryeelka ilkaha | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Daryeel iyo caafimaad / Daryeelka ilkaha
Iswiidhan waxa ka jira daryeelka ilkaha ee guud iyo daryeelka ilkaha ee barayfadka ah. Daryeelka ilkaha ee guud waxa maamula maamulka gobolka. Waxana lagu magacaabaa daryeelka ilkaha dadweynaha (Folktandvården).
Waxa Iswiidhan ka jira dhakhaatiir ilkood barayfad ah oo fara badan. Sharciyada lacagta aad bixinaysaa inta ay leegtahay way kala duwanyihiin. Wax ay ku xirantahay meesha aad degentahay iyo dhakhtarka ilkaha ee aad doorato.
Daryeelka ilkaha ee Iswiidhan wuxu badiyaaba ku saabsan yahay daryeel ilkood oo ka hortag ah. Taas macneheedu waxa weeye in aad had iyo jeer u tagto dhakhtarka ilkaha si aad caafimaad qabka ilkaha u ilaaliso.
Gudaha Iswiidhan dhamaan dadka ka yar 23 sano waxay helaan daryeel ilko oo bilaash ah, dhanka Daryeelka Ilkaha Dadweynaha iyo dhanka dhakhtarada ilkaha ee gaarka loo leeyahay labadaba. Dhamaan caruurta iyo dhalinyarada waxaa si joogto ah looga yeeraa dhakhtarka ilkaha si loo baaro, loo daryeelo iyo daryeelka ilkaha ee ka hortaga ah.
Goobaha intarnatka ee leh macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ilkaha iyo daryeelka ilkaha
Akhri dheeraad ku saabsan ilkaha iyo daryeelka ilkaha kuna qoran bogga intarnatka ee Hagida Daryeelka 1177. Akhri dheeraad ku saabsan taageerada daryeelka ilkaha ee dawladeed looguna talogalay adigaaga ka weyn 23 sano kuna qoran bogga intarnatka ee Qasnada Caymiska.